Samaynta Qaybaha Silikoon & Caag - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co., Ltd.
Chengda Rubber & Plastics waa adeeg buuxa oo silikoon ah oo loo habeeyey iyo soo saaraha alaabada caagga ah, waxaanu ku qalabaysanahay lix qaybood oo mashiinada isku xidhka caag ah oo horumarsan (laga bilaabo 100tons ilaa 300tons, cabbirka saxanka ugu weyni waa 46 inji), qolka isku dhafka silikoon shaqsiyeed iyo isku dhafka caag qolka, si buuxda u dhigma caaryada is-dhigay, iyada oo loo marayo cabbirka saxda ah iyo kormeerka ee xakamaynta tayada adag, waxay soo saari kartaa saxan sare oo saxan caag caag ah & shaabad, caag caag caadadii, dhammaan noocyada kala duwan ee caag caadadii iyo qaybo silikoon sida waafaqsan baahida macaamiisheena.
Guud ahaan, waxaan kugula talineynaa xulashada saxda ah ee macaamiisheena oo ku saleysan waxtarka qiimaha ugu fiican, hoos waxaa ku qoran hordhaca faahfaahsan ee habka adeegga ciriiriga caagga ah ee silikoon.
Adeegga Samaynta Alaabta:
Isku-buufinta isku-duubnidu waa habka meesha walxaha caagga ah ee horay loo sameeyay si toos ah u geliyo godadka caaryada, ka dibna ku xir caaryada oo la sii hayo wakhti go'an, walxaha caagga ah ayaa lagu cadaadiyaa qaabka godadka hoos yimaada cadaadiska iyo heerkulka gaarka ah.
Waa habka ugu badan ee loo isticmaalo caag, sababtoo ah qiimaha qalabaynta hooseeya, godadka badan, oo ku habboon wax soo saarka cabbir yar ama dhexdhexaad ah.
Habka Samaynta Alaabta:
Geli walxaha caagga ah godadka caaryada.
Xir caaryada oo ku hay cadaadis gaar ah iyo heerkul inta maadada caagga ah ay bogsanayso.
Marka daawadu dhammaato, fur caaryada oo ka saar qaybta.